Akanjo an-jaza, lamba an-jaza, Colth tanora - JiaTian
Akanjo volom-borona misy amboradara
Zipo tulle mavokely
Snowflake manasa ny palitao denim anao
Lamba ahazoana aina, fahatsapana malefaka sy mahafinaritra, asa-tanana tena tsara, ahazoana aina kokoa hanaovana akanjo mafana.
Ny lamba dia maivana, malefaka, hygroscopic ary tsy mahasosotra ny hoditra.
Hebei JiaTian Import & Export Co., Ltd., natsangana tamin'ny 2002, ary miorina ao an-tanàna Shijiazhuang, faritanin'i Hebei, nirotsaka tamin'ny fanondranana akanjo mihoatra ny folo taona. Niorina tamin'ny fifandraisan-davitra amin'ny varotra maharitra miaraka amin'i Eropa, Afrika Atsimo ary toerana hafa sy vokatra indrindra fa ny zaza sy ny akanjon'ny ankizy. Hatramin'ny niorenany, ny orinasanay dia manaraka ny fitsipiky ny "fahatokisana sy fahamendrehana" voalohany, azo ampiharina sy manavao, miaraka amin'ireo fotopoto-pitsipika ireo, manamafy ny fifandraisana sy ny fiaraha-miasa amin'ireo mpanjifa izahay.
Hevitra misongadina ao amin'ny herinandro
Zhang Qinghui, filohan'ny fikambanan'ny mpamorona lamaody any China, dia nandika ny zava-nisongadin'ity herinandro ity, "ity herinandro ity dia manarona ny fitafian'ny vehivavy, akanjo ho an'ny lehilahy, akanjo mariazy, akanjo, kiraro, kitapo, sns. mety ...
Mianatra ny mpikatroka mafana fo dimy taona Alice Jacob ...
Alice aktivista dimy taona Alice Jacob dia mianatra eo am-piandohan'ny fiainany fa ny fijoroana amin'ny zavatra inoanao dia tena afaka manatsara. I Jacob dia voalohany nanao anarana ho an'ny tenany tamin'ny fiandohan'ity volana ity, rehefa namoaka ny taratasy nosoratany ho an'ny CEO Gap, Jeff Kirwan, ny Washington Post, nangataka ny ho kely gir ...